“एक गुलाफको फुललाइ यसरी विधीसहित प्रयोग गर्नुहोस,बनाउँछ मालामाल,हटेर जान्छ घरको वास्तुदोष र आर्थिक समस्या।नछुटाई पढ्नुहोस” – Krazy NepaL
November 24, 2020 579
‘ज्यो’तिष’शास्त्र अनुसार गु’लाबको फुल शुक्रको कार’णले हुन्छ । यसले मानिसलाई ‘वल राम्रो सुग’न्ध मात्रै प्रदान ग’र्दैन’ यसले कुनै चमत्कार ‘पनि देखाउने गर्दछ ‘। यदि तपाई यस उपाय’लाई आफ्नो जीवनमा’ सहि तरिकाले अपनाउनुहुन्छ भ’ने तपाईको आर्थिक स्थिती राम्रो हुनेछ र नोकरी पेशामा पनि लाभ मिल्नेछ । आज हामी यही ज्योतिषशास्त्रद्धारा जा’न्ने काशीश गर्नेछौ गुलाफको यस्तो उपायको बारेमा जस’को उपाय अपनाउदा तपा”ई मालामाल पनि बन्न सक्नुहुनेछ । आउनुहोस् यसको बारेमा विस्तार रु’पमा जानौँ ।
१ . ज्योतिषशास्त्र अनुसार गुलाफको फुललाई रातो चन्दन र रोली लिएर त्यलाई रातो कपडामा बाँधनुहोस् र फेरी त्यस’लाई कुनै मन्दिर या आफ्नो घर’को पुजाको’ठामा राख्नुहोस् । एक ‘हप्ता पछि गणेशजीको’ पुजा गर्नुहोस् र ‘त्यस कपडालाई’ घरको तिजोरी या त घरको पैसा राख्ने दराजमा राख्नुहोस् यसले तपाईको आर्थिक समस्या हटेर जानेछ तथा तपाई मालामाल हुनुहुनेछ ।
२. गुलाफको फुलमा शुक्र देवको बास हुने गर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले शुक्रबारको दिनमा गुलाफको पुरा वि’धी विधान अनुसार कपुर जलाए’र साँझको समयमा दे’वीलाई चढाउ’नुहोस् । यसले तपाईको जीवनमा दै’विक शक्तिको ‘अ’सर पर्नेछ ‘र शुक्रको प्रभाव पनि मज’बुत हुनेछ । साथै यस उपा’ले अचानक धन प्राप्ति हुन्छ र तपाई मालामा’ल हुनुहुनेछ । यति मात्रै होइन यो उपायले घरमा कहिल्यै पनि गरीबी भित्रिदैन र परिवारका सदस्यहरुले पनि आफ्नो लक्ष्य सजिलै सँग ”प्राप्त गर्दछन् ।
३.यदि त’पाईलाई मे’हेनत गरे पनि त्यसको स’फलता मि’को छैन भने त’था तपाईको घरको आर्थि’क स्थिती राम्रो छैन भने तपाई यस समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागी गुलाफको फुलको उपाय प्रयोग गर्नसक्नुहुनेछ । तपा’ईले पाँचौ पूर्णिमा’ सम्म तीन गुलाफला’ई जलमा प्रवा’हित गर्नुहो’स् । यसो गर्नाले तपाईमाथि शुकको’ शुभ प्रभाव पर्नेछ र तपाई सफलताको सिढिँमा चढ्दै जानुहुनेछ । साथै तपा”ईको आर्थिक स्थितमा पनि सुधार आउनेछ । र तपाईलाई गुलाफको फुलले मालामाल बनाउँनेछ ।
४. कहिलेकाँही मा’निसको जीवनमा शुक्रको प्रभाव अशुभ हुन जान्छ । जसको कारण मानिसको आर्थिक हालत कमजोर हुँदै जान्छ । तथा मानिस ‘ऋण नै ऋणमा दबिन थाल्छ । यस समस्याबाट बच्नको लागी तपाई शुक्र’बारको दिन’मा गुलाफको फु’ललाई सेतो कपडामा बाँधेर त्यसलाई पानीमा बगाइदिनुहोस् । यसले शुक्रको अशुभ ‘प्रभाव ”समाप्त हुनेछ र तपाईको आर्थिक स्थिती राम्रो हुँदै जानेछ । साथै तपाई ऋणबाट पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ । तथा नोकरी पेशामा पनि आर्थिक लाभ हुनेछ । गुलाफको फुल यो उपाय गर्नाले तपाईलाई मालामाल बनाइदिनेछ ।
Prev“भगवान गुणेशको दर्शन गरि आज मंसिर ९ गते/नोभेम्बर २४ मंगलबार तपाईको भाग्य कस्तो रहेको छ राशिफल हेर्नुहोस “
Next“मानसिक तनाब र चिन्ता भएकाे अवस्थामा पनि आफ्नाे मनलाई कसरी कन्ट्राेल गर्ने ? जानिराखौ”